प्रकाशित मिति : २०७५, २९ असार शुक्रबार ०७:३४
सार्वजनिक निकायको लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकले हरेक वर्ष आर्थिक अनियमितता र तिनमा सुधारका उपायसमेत सुझाएर प्रतिवेदन पेस गर्ने गर्छ । महालेखाले जुन विषयलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षणसहित प्रतिवेदन पेस गर्छ, त्योभन्दा ठूला सोही प्रकृतिका अनियमिता बर्सेनि बढ्छन् । आर्थिक अनियमितताका प्रश्न बढिरहेका छन् । आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्नु प्रणाली, कार्यान्वयन संयन्त्र वा समन्वय के अभाव हो ? सुधारका लागि कस्ता विधि अवलम्बन गर्ने ? यस्तै विषयमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा (दङ्गाल) सँग गरेको कुराकानी ।